Andro mazava fa tsy nisy niala ny olona rehetra niaraka nifety tamin'i Wawa sy ny tarika manontolo tao amin'ny Florida Palace Marseille ny alin'ny sabotsy hifoha ny alahady omaly.
Feno ny trano, ambiance motro tsy lany.
Hiazo an'i Paris ny tarika ka hanafana ny lanonana hanaovam-beloma ny taona 2019.
Hiaraka aminy, ao Rungis 47 rue des Solets 94150, amin'izany ry Big MJ, Lico Kininike, Rijade.
Fahombiazana ! Izay no mahafintina ny seho natolotry ny tarika AmbondronA tao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady tolakandro. Nanolotra seho niavaka ny tarika, na teo amin’ny sehatra izany na ny hira.
Nanome voninahitra manokana an’i Dadah Mahaleo ny tarika nandritra ny seho. Nanome sehatra ary nampiara-peo tamin-dry Reko - Fy & His Band (Fy Rasolofoniana) sy tarika Iraimbilanja nosolin’i Roger tena ihany koa.
Niara-niredona ny hira nalahatry ry Beranto, Kix, Honty, Ranto ary Blanc ny mpijery maro nameno trano, izay saika tanora ny ankamaroany.
Ny ketrika.com moa no nisahana ny famarotana ny tapakila fidirana teo amin'ny tranokala.
Nidina tao Maroantsetra ny delegasionan’ny governemanta notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben'ny governemanta Ntsay Christian, omaly alahady 29 desambra 2019. Nambarany fa harenina ao anatin’ny fotoana fohy ny lalana tapaka amin'ny RN5, izay mampitohy an'i Soanierana Ivongo – Mananara Avaratra – Maroantsetra, tapaka noho rano be nentin’ny andro ratsy nanodidina ny krismasy lasa teo.
Novatsiana fanafody ireo tobim-pahasalamana any an-toerana hifehezana ny mety fihanaky ny valanaretina.
Manomboka miverina ny famatsiana herinaratra izay tapaka nandritra ny herinandro.
Nitrangana halatra solika tao amin'ny tobim-pamokarana herinaratry ny Jirama Ambositra, ny Zoma teo tokony ho tamin'ny sivy ora sy sasany alina. Olona miisa sivy no tra-tehaka tamin'izany ka mpiasa ny roa, ary mpiambina ny fito. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny gazoala 170 litatra efa natao anaty daba miaty 20 litatra miisa sivy, ary nisy daba 12 hafa tsy mbola nisy solika.
Nampidirina am-ponja vonjimaika avy hatrany izy sivy lahy, raha toa ka efa mandeha ny famotorana amin'izao.
lundi, 30 décembre 2019 08:29
30 décembre: Il y a 44 ans la République démocratique malgache fut proclamée
30 décembre: Il y a 54 ans la République démocratique malgache fut proclamée
La République démocratique malgache est proclamée le 30 décembre 1975.